महिलाहरुको यी अंग छुदा आफैं स:म्बन्धका लागि अ:पिल गर्छन [३ टिप्ससहित] - Mitho Khabar
महिलाहरुको यी अंग छुदा आफैं स:म्बन्धका लागि अ:पिल गर्छन [३ टिप्ससहित]
June 23, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on महिलाहरुको यी अंग छुदा आफैं स:म्बन्धका लागि अ:पिल गर्छन [३ टिप्ससहित]
By सम्पादक -२ फाल्गुन २०७७, आईतवार १९:१३014
शा:रीरिक सम्बन्ध प्राय मानिसको आधारभुत आवश्यकता भैसक्यो । मानव जिवनमा स:म्बन्ध राख्नु धेरै नै आवश्यक हुन्छ । शा:रीरिक स:म्बन्ध रा:ख्न पुरुषहरु खु:ल्ला रुपले प्र’स्तुत हुन्छन भने महि:लाहरु लजाउने गर्दछ्न ।
म:हिलाहरु का य:स्ता अ:ङ्ग हरु छु:दा आफै स:म्बन्धको लागि अपिल ग’र्दछन : १ स्त:न २ ना’इटो ३ कानको मुनिको भाग *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
१. दिमागी क्षमता अर्थात् आइक्यू : क अध्ययनले के देखाएको छ भने महिलाहरुमा पुरुषमा भन्दा आइक्यू क्षमता बढि हुन्छ । स्मरण शक्ति तथा तर्कशीलताको मामिलामा महिलाहरु पुरुषभन्दा अगाडि हुने कुरा अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताको निष्कर्ष रहेको छ ।
२. सरसफाइ : सरसफाइको मामिलामा पनि महिलाहरु पुरुषभन्दा अब्बल हुन्छन् । अमेरिकाको सानडियागो विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुका अनुसार कार्यालयमा पुरुष कर्मचारीको टेबल महिला कर्मचारीको भन्दा फोहोर हुने गर्छ । उनीहरुका अनुसार पुरुषले काम गर्ने ठाउँमा महिलाले काम गर्ने ठाउँमा भन्दा २० प्रतिशत बढि ब्याक्टेरिया हुन्छन् ।
३.तनावको सामना : तनावको सामना गर्ने र महत्वपूर्ण कामका लागि राम्रो तयारी गरेर उक्त कामकुरामा आफ्नो क्षमता मज्जाले देखाउने मामिलामा महिलाहरु पुरुषभन्दा अब्बल मानिन्छन् ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार यहीँ क्षमताका कारण प्राय नयाँ जागिर खान जाने मामिलामा अन्तरवार्ताको क्रममा महिलाको प्रस्तुती पुरुष प्रतिस्पर्धीको भन्दा राम्रो हुन्छ ।
४.सुन्दरता : सुन्दरताको मामिलामा त महिलाहरु पुरुषभन्दा दश कदम अगाडि हुन्छन् नै । अध्ययनले पनि के देखाएको छ भने जैविक क्रम विकाशकै सिलसिलामा महिलाहरु आफ्ना पुर्खा भन्दा सुन्दर बन्दै गएका छन् ।
अझ रोचक कुरा त के भने सुन्दर महिलाहरुले अरु सामान्य महिलाले भन्दा बढि बच्चा जन्माउँछन् र सुन्दर महिलाको पहिलो बच्चाको रुपमा अक्सर छोरी जन्मिन्छ ।
५.दुर्घटनामा जोगिने : अध्ययनले के देखाउँछ भने विभिन्न खालका सडक दुर्घटनामा महिलाहरु भन्दा पुरुषहरुको मृत्यु धेरै हुनेगर्छ । अझ रोचक कुरा त के भने कुनै गाडि दुर्घटना हुँदा त्यसका महिला यात्रु भन्दा पुरुष यात्रुको मृत्युको दर बढि हुन्छ । अध्ययनले कार दुर्घटनामा महिलाको तुलनामा पुरुषको मृत्युको जोखिम ७७ प्रतिशत बढि हुने देखाएको छ ।
६.मनको बह पोख्नमा अब्बल : आफ्नो मनको बह, समस्या वा पीडा साथीसँगीसँग बिसाएर समस्याको समाधान खोज्ने मामिलामा पनि महिलाहरु पुरुषभन्दा अगाडि हुन्छन् ।
७. महिलाहरु पुरुषको तुलनामा स्वस्थ भोजनका पारखी हुन्छन् । पुरुषहरु मासुका परिकार तथा ड्राइ फुड बढि मन पराउँछन् भने महिलाहरु सादा खानामा रुची राख्छन् ।
८.महिलाहरुमा रोग प्रतिरोधी क्षमता पुरुषमा भन्दा बढि हुन्छ । यो इस्ट्रोजेन हर्मोनका कारण भएको हो ।
९.महिलाको आयू बढि : तथ्यांकले के देखाउँछ भने विश्वमा भएका १ सय वर्ष भन्दा बढि उमेरका मानिसमध्ये १ सय मा ८५ जना महिला नै छन् । यसको अर्थ के भने महिला पुरुषभनदा औषतमा १० वर्ष बढि बाँच्छन् ।
१०.महिला हाकिम भएको कार्यालयमा कामदारको कार्यसम्पादन उच्च हुनेमात्र होइन महिलाले गरेको लगानीले दिने प्रतिफल पुरुषको लगानीको तुलनामा बढि हुन्छ ।
सर्बोच्चको आदेशले केपी ओलीको हार भयो कि जीत?
कलाकार केदार घिमिरे ले ओलीलाई व्यंग्यात्मक गर्दै के भनेत त्यस्तो ओली नै दङ्ग पर्ने गरि
आफुलाई मन पर्ने व्यक्तिले वास्ता नगरेमा, यी उपाय अपनाउनुहोस्…जिन्दगी भर साथ दिनेछ
चैत २५ गते मंगलबार शिव भगवानको दर्शन गरि आजकाे राशिफल हेर्नुहाेस,यी राशिलाई आज यस्ताे छ !